Petha uchungechunge lomhlathi oyisihluthulelo oyisihluthulelo - I-China PE chungechunge lomhlinzeki oyisisekelo we-crayher,Factory -PYM
Njengomsuka we-crusher oyisisekelo onemisebenzi ezinzile,I-peus crayher yochungechunge lwe-Pex livame ukusetshenziswa njenge-crusher eyinhloko emigqeni yokukhiqiza i-machry, amaminerali we-ore okuchoboza izitshalo kanye nezitshalo ezenza i-powder.
Ubukhulu bokufaka: 0-1020mm
Material: Granite, zemabula, basalt, limestone, asebenza ngebhethri, amatshe amatshe, i-ore yethusi, i-iron ore
I-Pe Jaw Crusher isetshenziswa kabanzi ekuvutheni zonke izinhlobo zama-ores namatshe abe izingcezu ezincane ezimayini, izinsimbi, izinto zokwakha, umgwaqo omkhulu, ujantshi, ukulondolozwa kwamanzi nezimboni zamakhemikhali njll.
I-crayher yomhlathi isebenzisa amandla anqenqemayo ukwaphula izinhlayiya. Le ngcindezi yemishini itholakala ngemihlathi emibili ye-crusher eyodwa iqondiswe ngenkathi enye iphindaphinda. I-crusher yomhlathi iqukethe isethi yemihlathi emi mpo, umhlathi owodwa ugcinwa umile futhi ubizwa ngokuthi umhlathi okungaguquki ngenkathi omunye umhlathi ubizwa ngokuthi umhlathi oshukumisayo, ihamba ibuyela emuva ihambisana nayo, ngamakhamera noma nge-pitman mechanism, esebenza njengeklasi II lever noma i-nutcracker, Ukuchoboza itshe elikhulu laba yizicucwana.
1.Ifa lama-classical asendulo
2.Isilinganiso esikhulu sokuchotshozwa, ukukhiqiza okuphezulu
3.Uhlobo olukhulu lokulungiswa kokukhululwa kokukhululwa
4.Isakhiwo esilula, ukuthembeka okuphezulu, ukulungiswa okulula
5.Izinze isebenza ngomsindo omncane
Usayizi wokuvula okuphakelayo(mm)
Khipha usayizi wokuvula (mm)
umthamo(t / h)
Ukujikeleza kwe-shaftric(r / imizuzu)